Juventus oo xaqiijisay in xiddig kale oo ka tirsan kooxdeeda koowaad laga helay Korona Fayras – Gool FM
(Turin) 06 Abril 2021. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa la tacaaleysa xaaladda xanuunka Korona Fayras kaasoo safkeeda kooxda koowaad kusoo noq-noqday.
Bianconeri ayaa xaqiijisay maanta in xanuunka Koofi-19 laga helay laacibka garabka ka ciyaara ee Federico Bernardeschi, kaasoo noqday xiddigii saddexaad ee Juve ka tirsan kaasoo laga helay fayraskan tan iyo markii la aaday ciyaarihii qarammada ee lasoo dhaafay.
Merih Demiral iyo Leonardo Bonucci ayaa dhowaan laga helay Korona iyadoo hadda ay qaadanayaan maalmo karaantiil ah.
Dhanka kale, Bernardeschi ayaa qayb ka ah xiddigaha xulka qaranka Italy ee laga helaya fayraskan tan iyo markii ay kasoo laabteen waajiboodkii qaranka Azuri, xilli Alessandro Florenzi, Marco Verratti, Salvatore Sirigu, Vincenzo Grifo iyo Alessio Crago dhammaantood uu haleelay Korona.
Ugu dambeyn Juventus oo xaqiijisay kiiska laacibkan ayaa sheegtay inuu galay maalmo karaantiil ah.
Sagaal ciyaaryahan oo xagaagan laga fasaxayo Chelsea... (& Jorginho oo hoggaaminaya)
RASMI: Mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxda Bayern Munich oo laga helay Korona Fayras